Adam Lallana Oo Daboolka Ka Qaaday Qofkii Sababta U Ahaa Inuu Ka Tago Liverpool - Gool24.Net
Adam Lallana Oo Daboolka Ka Qaaday Qofkii Sababta U Ahaa Inuu Ka Tago Liverpool
Adam Lallana ayaa runta ka sheegay qaabkii uu uga tegay Liverpool xagaagii dhowaa iyo qofkii sababta u ahaa inuu albaabka ka baxo, waxaanu bannaanka keenay arrimo aanay ogeyn taageereyaasha kooxdu.
32 jirkan reer England ayaa si xor ah uga tegay Liverpool dhamaadka xili ciyaareedkii hore, kaddib markii loosoo bandhigi waayey qandaraas cusub, isla markaana loo ogolaaday inuu dhamaysto heshiiskiisa.
Adam Lallana waxa uu si daacad ah uga sheegay in wada-hadal ay yeesheen tababare Jurgen Klopp uu sabab u noqday inuu soo afjaro waayihiisii Anfield ee lixda sannadood ahaa, isla markaana uu tababaruhu u sheegay inuu koox cusub raadsado si uu fursado ciyaareed oo badan u heli karo.
Inkasta oo uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo ciyaartoyda Liverpool u qaadday koobkoodii ugu horreeyey ee Premier League ah muddo soddon sannadood ah kaddib, haddana Adam Lallana waxa uu qiray in Jurgen Klopp uu u sheegay in aanu mustaqbalkiisu oollin kooxda, waxaanu yidhi: “Waxaan la hadlay tababare Jurgen Klopp bishii October ee sannadkii hore, waanu wada-fadhiisanay, waxaananu yeelanay wada-sheekaysi furan.
“Xidhiidh fiican ayaanu lahayn, waxaanan weydiiyey, ‘sidee ayuu kula yahay sannadka dambe?’. Waan ogaa in heshiiskaygu dhamaanayo, waxa kale oo aan ogaa in aanan si joogto ah u ciyaari doonin.”
Adam Lallana oo hadalkiisa sii wata waxa uu iftiimiyey nooca ay ahayd jawaabtii uu ka helay Jurgen Klopp, waxaanu yidhi: “Inkasta oo aan door qurux badan ku lahaa kooxda, haddana waxa aan doonayay xoogaa daacadnimo ah. Wuxuu igu yidhi bishii October, ‘Wakiilkaaga u sheeg si uu koox cusub kuugu soo raadiyo.’
“Taas macnaheedu may ahayn kuma jirtid qorshahayga ama kuma isticmaalayo. Afar maalmood kaddib waxa i ciyaarsiiyey kulankii Old Trafford oo aan goolka barbarraha dhaliyey, waxayna ila tahay in taasi caddaynayso nooca shaqsiyadda Jurgen ay tahay. Waa qof aad daacad u ah.”
Adam Lallana ayaa u wareegay Brighton oo uu si xor ah ugu biiray xagaagii tegay.